Video:-Madaxweyne Gaas oo si cajiib ah loogu soo dhaweeyay Magaalada kismaayo – Idil News
Video:-Madaxweyne Gaas oo si cajiib ah loogu soo dhaweeyay Magaalada kismaayo
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo weftigii balaadhnaa ee uu hogaaminayey ayaa maanta gelinkii danbe 08 October 2017 si-diiran loogu soo dhoweeyey magaalada Kismaayo ee caasimadda kumeel gaadh ka ah ee maamulka Jubbaland.
Madaxweynaha iyo weftigiisa ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo kusoo dhoweeyey Madaxweynaha Maamulkaasi Mudane Axmed Maxamed Islaan, Madaxweyne ku-xigeenadiisa, Guddoonka Baarlamaanka Jubbaland, masuuliyiin ka tirsan goleyaasha maamulkaasi, saraakiisha ciidanka Jubbaland, Isimo, Nabadoono, waxgarad iyo boqolaal shacabka magaalada Kismaayo.
Soodhoweyn kadib Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa si isku midda ugu mahadnaqay shacabka iyo Xukuumadda reer Jubbaland ee kusoo dhoweeyey garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo.
Ugu danbayn, Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa uga mahadnaqay Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan iyo xukuumaddiisa gogosha wadatashi ee ay u dhigeen maamulada dalka, waxaana uu xusay Madaxweynuhu in shirkani muddo lasoo dhirin-dhirinaayey qabsoomidiisa, isla markaana uu Madaxweynaha laftiisu waday illaa xiligii dawladdii hore ee uu Madaxweynaha ka ahaa Mudane. Xasan Shiikh Maxamuud isku imaatinka shir wadatashi oo lagu magcaabo (QUDHAC FORUM ), kaasi oo lagaga arrinsan lahaa hanaanka geedisocod ee dalka.